ပြင်သစ်နိုင်ငံမှသတင်းများ - La France en Birmanie
ကြိုဆိုခြင်း > သတင်းများ > ပြင်သစ်နိုင်ငံမှသတင်းများ
The seventh session of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Plenary will take place from 29 April to4May 2019 at UNESCO headquarters in Paris. At this event, IPBES will present its Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services to representatives of 130 States.
လူ့အခွင့်အရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွှန့်ခြင်း နှင့် ကျားမဝိသေသလက္ခဏာအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (The International LGBTI Fund) သည် နောက်ဆက်တွဲရည်ညွှန်းပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာများကို တတိယအကြိမ် ခေါ်ဆိုနေပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုလျှင် ယူရိုငွေ 50 000 မှ ယူရိုငွေ 60 000 အထိ ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
A call for applications is launched for the 2018 edition of the Human Rights Prize of the French Republic, organized by the National Consultative Commission on Human Rights.
ပထမအကြိမ် ပါရီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်မှ (၁၃)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖြစ်နေသော ပဋိပက်ခများပေါ်တွင် အဖြေရှာနိုင်ရန်အတွက် ညီလာခံကို နှစ်စဉ်ကျင်းပကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကဓိကရင်ဆိုင်မှုများ၊ ပိုမိုမျှတသော ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း နှင့် ထိရောက်သောဘက်ပေါင်းစုံစနစ်တို့တွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်သော ထိရောက်သော အတွေးအခေါ်၊ စီမံကိန်း နှင့် အစပြုပျိုးထောင်မှုများကိုဖေါ်ထုတ်သွားရန်ဖြစ်သည်။
(၁၀) ကြိမ်မြောက် လိင်တူချစ်သူများ အားကစားပွဲတော်ကို ပါရီမြို့တွင် ဩဂုတ်လ (၄)ရက်မှ (၁၂)ရက်နေ့ အထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်သူပေါင်း (၁၅ ၀၀၀) ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသူပေါင်း (၄၀ ၀၀၀) လာရောက်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤ လိင်တူချစ်သူများ အားကစားပွဲတော်သည် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လူကြီးအားလုံး ပါဝင်ဆင်နွဲနိူင်သော အရေးအပါဆုံး အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု့ ပွဲတော်ဖြစ်သည်။